Ithaveni eneziko, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela
Sinikezela nge-tavern yethu emangalisayo, apho unokufudumala khona kunye neziko kwiinyanga zasebusika kwaye ujabulele ilanga lasehlotyeni kwigadi yethu. Ukungena okuzimeleyo kunye negumbi lokuhlambela labucala kunye nekhitshi. Sinokwamkela iintsapho okanye amaqela.
Ithaveni yethu liflethi yokwenyani. Ungena usuka kumnyango ozimeleyo onika ukufikelela kwigumbi le studio malunga ne-approx. Iimitha ezingama-60, ezibandakanya ikhitshi kunye nomatshini wokuhlamba izitya, indawo yomlilo, ibhedi ephindwe kabini, i-1 sofa / ibhedi, umabonwakude kunye negumbi lokuhlambela elinomatshini wokuhlamba kunye nesomisi.
Sihlala kwindawo yokuhlala ezolileyo kakhulu kufuphi nepaki yehlathi lepine, indawo enemithi egcwele iindlela ezinomdla zokugqunywa ngeenyawo okanye ngebhayisikili.
Ifulethi / ithaveni esibonelela ngayo izimele ngokupheleleyo. Ukuba iindwendwe zifuna inkampani, inkampani kunye novuyo lwabantwana bethu abathathu ngokuqinisekileyo aluyi kuswela. Ukuba, ngakolunye uhlangothi, bafuna ukuphumla kwaye bachithe iintsuku ezimbalwa ngoxolo, akukho ngozi yokuphazamiseka: indlu ikwimigangatho emibini ezimeleyo, ifanele wonke umntu, zombini iintsapho kunye nabantwana kunye namaqela aselula. . ..
Ifulethi / ithaveni esibonelela ngayo izimele ngokupheleleyo. Ukuba iindwendwe zifuna inkampani, inkampani kunye novuyo lwabantwana bethu abathathu ngokuqinisekileyo aluyi kuswela.…